Boterero (Period) apa kureva mizera yakachinjika pa Chapotera. Sokuti muzera unovambira pane Hydrogen (H) kusvika pane Helium (He) iboterero rokutanga. Boterero rechipiri rinovambira pane Lithium (Li) kusvika pane Argon (Ar).
Boka (Group) apa kureva shongwe dzinodzika kubva kumusoro ichienda zasi pa Chapotera. Sokuti shongwe inovambira pane Beryllium (Be) kusvika pane Radium (Ra) iboka rechipiri. Boterero regumi rinovambira pane Nickel (Ni) kusvika pane Darmstadtium (Ds) .